Madaxweynaha Kenya oo amaanka kala shiray ganacsatada Soomaalida – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Nairobi – Mareeg.com: Madaxweynhaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo kulan la qaatay ganacsatada Soomaalida ee ku nool xaafadda Eastleigh ee magaalada Nairobi ayaa kala halday arrimaha amaanka.
Sida uu ku qoray boggiisa barta xiriirka bulshada ee Facebook, Uhuru ayaa sheegay in ganacsatada uu kala hadlay wax ka qabashada arrimaha ammmaanka ee Kenya, wuxuuna xusay inay ku heshiiyeen inay ganacsatada iyo qeybaha kale ee bulshada ay kaalin muhiim ah ka qaataan la dagaallanka argagaxisada ee Kenya.
Uhuru ayaa sheegay inay waajib tahay in la joojiyo weerarrada argagixiso ee lagu bar-tilmaameedsanayo dadka aan waxba galabsan ee Kenyanka ah.
Madaxweynaha Kenya wuxuu sheegay in la isku raacay in hoggaanka sare ee waaxyaha ammaanka Kenya ay sameeyaan guddi ay ku jiraan gaancsatada, dhallinyarada, dumarka iyo hoggaamiyeyaasha diinta ee Soomaalida Kenya, si ay uga qeyb-qaataan hannaanka lagu aqoonsanayo kuwa ku lugta leh fal-dambiyeedyada ka dhaca gudaha Kenya.
Yuusuf Xasan waa xildhibaan laga soo doorto deeganka Kaama Kunji ayaa sheegay in kulankaas looga hadlay arrimo badan oo ay ka mid tahay dhibaatada lagu Soomaalida oo lacago baad ah laga qaato.
Xildhibaanka ayaa sheegay in madaxweynaha ay u sheegeen in dadka Soomaalida ee ku nool xaafada Islii loola dhaqmo sidda xoolaha oo kale.
Wuxuu kaloo sheegay in markii madaxweynaha loo sheegay in uu aad uga carooday oo uu ballan qaaday in uu qaka qaban doono.
Xildhinbaan Yusuuf ayaa muujiyay in odayaasha ku dhaqan xaafada Islii ay iska dhex doorteen guddiyo la shaqeeya dhallinyarada iyo hey’addaha ammaanka si looga fogaado falalka ammaan darida ee ka dhacay xaafada Islii oo ay ku badan tahay Soomaalida.
Mid ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee ka qeybgalay shirka ayaa warbaahinta u sheegay iney madaxweynaha Kenya u cadeeyeen in mid ka mid ah saldhigyada Booliska xaafadda Eastleigh ee Soomaalidu degto uu noqday meel lagu kala iibsado Soomaalida iyo Muslimiinta kale.
Wasiirka Amniga gudaha dowlada Kenaya, Joseph Ole Lenki ayaa 25-kii bishaan Maarso ku amray dhamaan dadka qaxootiga Soomaalida ah ee ku sugan magalooyinka dalkaas in ay dib ugu laabtaan xeryaha qaxootiga ee loogu talagalay ee ku yaala Kenya ee Dhadhaab iyo Kakuma.
Markii uu soo baxay amarka wasiirka ayaa waxaa booliska Nairobi bilaabay inuu qaqabto Soomaalida, waxeyna xasbsiyada ku shubeen in ka badan 500 ruux Soomaali ah, arrinkaas oo ay ka xumaatay dowladda Soomaaliya, sida uu sheegay safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamed Cali Nuur (Ameeriko).